Mwanakomana wangu, bhiri, arikutungamira kumusoro kurira kwekugadzira kwake High Chikoro kuita kweWizard yeOz. Mwanasikana wangu achave arimo zvakare, achitamba imwe yemunchkins. Katie ave kutowana mamwe ma rave ongororo nevanhu vari mukutamba… akanyatsonaka sezvo achingova kuMiddle School! Kwaive kutambanuka kwaari kunyange kugona kuenda kunopinda mukutamba. Iye anonyatsochida, zvakadaro. Ndinogara ndichishamisika netarenda revana vangu vese.
Pandakaona vhidhiyo iyi pa3R.e.Medium, ndakamuratidza uye zvakamukurudzira kuti aunze gitare rake mukudzidzira nhasi. Mwanakomana wangu haana dambudziko rekuvaraidza boka revanhu… asi kwete boka revanhu risingazive zviri kuuya. Fungidzira uchiita panzira yepasi peParis! Ndo zvakaitwa nevanhu vane tarenda zvisingaite:
Ini handina tarenda remimhanzi asi ini ndagara ndichida kufamba ndichienda kunzvimbo uye kudzinga amai vacho, ndakadzima Quincy Jones, anononoka kuita jamu kutarisa izvi, chimbofunga Doug, uyu anogona kunge uri iwe, ini naChris tichidzika EL muChicago, rega iedze. zano riri nani, iwe naChris muedze uye ini ndichabata iyo viedo cam! basa rakanaka
Ndinewe pane iyo, JD! Ini ndinogona kutakura katsamba uye ini ndaiwanzo kukwanisa kutamba nezve 100 lbs apfuura. Ini ndinoramba ndichiudza mwanakomana wangu kana akapfuma uye aine mukurumbira kuti ndichaimba nziyo imwechete naye padariro.
Ndinofunga ari kunetseka. 🙂
Nonpoint ine dombo rakakura vhezheni rekunzwa (mumhepo manheru ano) futi.
Ndine urombo, yaive yakavanzwa track pakasunungurwa neMushroomhead
Ndeipi album yaive iyoyo? Mwanakomana wangu aifarira Mushroomhead. Ndiri fan of SlipKnot pachangu… kunyanya mumugwagwa uye ndinoda kubvisa kutsamwa kwangu. Zvimwe izvo kana Notorious BIG (ini ndinoteerera kune zvese!).
Hei- ndainyanya kufarira boka iri. Kutenda nekuigovana. Zvimwe zvese zvichiri kupfuura nemusoro wangu! (ps. Ini ndinofanira kuudza Mike kuti awane zvimwe zvinhu pane yake saiti!)